जागरण र उत्पादनमा लाग्नुस् : प्रधानमन्त्री - NepalDut NepalDut
चैत्र २४ गते २०७७
नारी जागरण अभियान गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ५ मा रहेको हाम्रो रचनात्मक गार्मेटको समूहले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव लगायतसँग भेटघाट गरी आफ्ना माग र गरेका कामबारे जानकारी गराएको छ ।
सोमबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक जागरण र उत्पादनमा सक्रिय हुन आग्रह गरे । उनले चन्दा जम्मा गरेर सानातिना कार्यक्रम गर्ने बाटोतिर नलाग्न आग्रह गर्दै मान्छेको जीवनस्तर बदल्ने खालका काम गर्न आग्रह गरे ।
११ सदस्यीय टोलीसँग प्रधानमन्त्रीले मान्छे बोक्सी हुँदैनन् भन्ने जागरण, छोरीलाई पढाउने अभियान, भान्छामा सुधार, विषमुक्त भान्छा, सरसफाइ जस्ता सामान्य मानिएका विषय योगदान गर्न आग्रह गरे । उनले सबै नागरिकले आआफ्नो ठाउँबाट दायित्व निर्वाह गरे सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल चाडै व्यवहारमा लागू हुने जनाए ।
प्रधानमन्त्रीले हाम्रो रचनात्मकले उत्पादन गरेका पोशाकको प्रशंसासमेत गरे । उनले कार्यालयको तर्फबाट ५० थान साडी र चोलो अर्डरसमेत गरेका छन् ।
टोलीमा पोखरा ५ उद्योग सञ्चालक समिति संयोजक तथा नारी जागरण अभियानका संयोजक अञ्जु क्षेत्री, गार्मेटका अध्यक्ष कल्पना भुवाजी क्षेत्री लगायत थिए । यो टोलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पदमाकुमारी अर्याल, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री जुलीकुमारी महतो, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आले, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकर वैरागी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतसँग भेटघाट गरेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री रावतले टोलीलाई सम्मान गरे । गार्मेन्टले लकडाउनका बेला माक्स, पिपिई लगायतका सामग्री अभियानकै रुपमा उत्पादन गरी विभिन्न जिल्लामा वितरण गरेको थियो ।
पोखरा ५ उद्योग सञ्चालक समिति संयोजक एवं अभियन्ता अञ्जु क्षेत्रीले प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्री र मुख्यसचिवलाई भेटी उनीहरुको सुझाव लिएको बताइन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ५ की वडा सदस्यसमेत रहेकी क्षेत्रीले गार्मेन्ट र अभियानले गरेका गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
महिलालाई स्वावलम्बी र उद्यमी बनाउन एक घर, एक उद्यमी अभियान चलाउन सरकारका विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । स्वदेशमै उद्यम चलाउने वातावरण बनाएर रोजगारी बढाउने र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान आफूहरु लागिपरेको उनले बताइन् ।